Mustafe Cagjar oo diidey in kalsoonida loo qaado maamulkiisa iyo fowdo ka dambeysay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Mustafe Cagjar oo diidey in kalsoonida loo qaado maamulkiisa iyo fowdo ka dambeysay
Waxa maanta fowdo ka dhacdey golaha Somali galbeed ee xaruntiisu yahay Jigjiga kadib markii xildhibaano aad u farabadan dalbadeen in kalsoonida loo qaado maamulka uu hogaamiyo Cagjar.
Waxa markiiba si aan waafaqsanayn sharciga u laashay afhayeenka barlamaanka oo uu ku tilmaamay xildhibaan inay welli moodo in dawlada Itoobiya ay ka taliso Tigree iyo Cabdi Iley.
Xildhibaanadii codka kalsoonida waday ayaa kadib ka dareeray golaha, waxayna saxaafada kula hadleen dibedda ayagoo sheegay sidey wax u dhaceen. Gabdhaha xildhibaanada ayaa sheegay in moobilada lagala hadhay qaarna u hanjabeen askartu.
Xildhibaan la jidh-diley
Waxa askarta Mustafe Cagjar dhaawac u gaysteen xildhibaan Cabdishakuur Cismaan Dhegaweyne. Tani oo ku soo xasuusinaysa hab dhaqankii Tigreega. Fiirso sawirka hoose oo ah xildhibaanka jidh-dilka lagula kacay.
Mustafe Cagjar ayaa ku fashilmey mudada uu joogo in la ogaado jihadda Somali galbeed qaadi doonto, isagoo dhinaca kale lagu eedaynayo in aanu waxba dhaamin Cabdi Iley markey noqoto wax qabadka iyo qabyaalada.